ငါးပြတိုက်များအတွက်ကျောပိုးအိတ် filter များ: အထိရောက်ဆုံးနှင့်အသံတိတ်မော်ဒယ်များ | ငါးများ
ကျောပိုးအိတ် filter များသည်ငါးပြတိုက်တစ်ခု၊ အကြီး (သို့) အငယ်အတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်သင်ဟာငါးလောကထဲကိုအသစ်အဆန်းတစ်ခု (သို့) အတွေ့အကြုံကောင်းရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရေးမပါဘူး။ ၎င်းတို့သည်အခြားအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အင်္ဂါရပ်များအပြင်စစ်ထုတ်ခြင်းသုံးမျိုးကိုပံ့ပိုးပေးသောအလွန်ပြည့်စုံသောကိရိယာများဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကွဲပြားခြားနားသောကျောပိုးအိတ်စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့သည်အဘယ်နည်း၊ ၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ပုံနှင့်မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်များကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဘာသာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စား။ သင့်ကိုယ်သင်နက်နက်နဲနဲအသိပေးလိုလျှင်ဤအခြားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် ငါးမွေးကန် filter များ.
1 ငါးမွေးကန်များအတွက်အကောင်းဆုံးကျောပိုးအိတ် filter များ
4 အကောင်းဆုံးကျောပိုးအိတ် filter အမှတ်တံဆိပ်
5 ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးပြတိုက်အတွက်ကျောပိုးအိတ် filter ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း
6 အတိတ်ဆိတ်ဆုံးကျောပိုးအိတ် filter ကဘာလဲ။
ငါးမွေးကန်များအတွက်အကောင်းဆုံးကျောပိုးအိတ် filter များ
BPS ပရိုဖိုင်းစစ် ...
AstroAqua-Filter ကျောပိုးအိတ် ...
AKKEE ငါးမွေးကန်စစ်စစ်၊ ...
ကျောပိုးအိတ် filter များသည်ငါးပြတိုက်၏ရေပန်းအစားဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ နာမည်အကြံပြုသည့်အတိုင်း၎င်းတို့သည်ကျောပိုးအိတ်ကဲ့သို့ငါးပြတိုက်၏အစွန်းတစ်ခုမှဆွဲထားသည်။ ၎င်းတို့သည်ရေကိုစုပ် ယူ၍ သန့်စင်ပြီးအညစ်အကြေးကင်းစင်ပြီးငါးကန်ထဲသို့ပြန်ကျသွားသဖြင့်၎င်းတို့မဖြတ်မီ၎င်းတို့စစ်ထုတ်များကို ဖြတ်၍ ၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။
ကျောပိုးအိတ်ဖစ်သည် ၎င်းတို့တွင်ပုံမှန်အားဖြင့် filter အမျိုးအစားသုံးမျိုးပါ ၀ င်သည် ငါးပြတိုက်များအနေဖြင့်အသုံးအများဆုံးစီစစ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ စက်မှုကိုစစ်ထုတ်ခြင်း၌ရေကိုပထမဆုံး ဖြတ်၍ စစ်ထုတ်ခြင်းသည်အကြီးဆုံးအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားသည်။ ဓာတုဗေဒစစ်ထုတ်ခြင်းတွင်အသေးဆုံးအမှုန်များကိုဖယ်ရှားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဇီဝဗေဒစစ်တမ်း၌ငါးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောဒြပ်စင်များကိုဘက်တီးရီးယားများအဖြစ်ပြောင်းလဲစေသောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
ကျောပိုးအိတ်တွင် filter အရေအတွက်များစွာရှိသည် အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို ဤအမျိုးအစားအတွက်စစ်ထုတ်ရမလားမရွေးသောအခါအသုံးဝင်လိမ့်မည်။
ဒီ filter အမျိုးအစားတစ်ခုရှိတယ် အားသာချက်များစွာအထူးသဖြင့်၎င်းသည်မည်သည့်အစပြုမှုအတွက်မဆိုပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်စေသော၎င်း၏ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။
သူတို့က အလွန်ပြည့်စုံသောထုတ်ကုန် ၎င်းတွင်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သည့်စစ်ထုတ်မှုသုံးမျိုး (စက်မှု၊ ဓာတုနှင့်ဇီဝဗေဒ) တို့ပါ ၀ င်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ပုံမှန်ပါပဲ ၎င်း၏ထိန်းသိမ်းမှုသည်အလွန်စျေးကြီးသည်မဟုတ် ငါးပြတိုက်အတွင်းစုပုံထားသောပမာဏနှင့်ငွေပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်နှစ်ပတ် (သို့) ဒီထက်နည်းသည်။
ဒါပေမယ့်ဒီ filter အမျိုးအစားလည်းပါပါတယ် အားနည်းချက်အချို့ရှိသည်အထူးသဖြင့်၎င်းကိုအခြားသူများကဲ့သို့ခံနိုင်ရည်မရှိသောမျိုးစိတ်များနှင့်ဆက်စပ်သည်။
ယင်းမှ Betta ငါးများသည်စိတ်အားထက်သန်မှုလည်းမရှိပါfilter သည်ရေကူးရန်ခက်ခဲသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုကူးခတ်ရန်ခက်ခဲစေသည်။
El ဓာတု filter ကို ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်မဟုတ်၊ အနည်းဆုံးအခြားနှစ်ခုကဲ့သို့ရလဒ်ကောင်းမပေးပါနှင့်။
အကောင်းဆုံးကျောပိုးအိတ် filter အမှတ်တံဆိပ်
ဈေးကွက်ထဲမှာငါတို့ရှာတွေ့နိုင်သည် ကျောပိုးအိတ် filter များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Queen တံဆိပ်သုံးခု ၎င်းသည်သင်၏ငါးပြတိုက်ရှိရေကိုရွှေဂျက်လေယာဉ်များနှင့်တူသည်အထိရေစစ်ထုတ်ခြင်းကိုတာဝန်ယူလိမ့်မည်။
ငါတို့အကြောင်းပြောပြီးပြီ AquaClear filter များ မကြာသေးမီက ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောငါးမွေးမြူရေးပညာရှင်နှစ် ဦး စလုံး၏ထောက်ခံဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းသည်အခြားစျေးနှုန်းများထက်အနည်းငယ်ပိုမြင့်ကြောင်းသိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ သူ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့အရည်အသွေးကငြင်းလို့မရဘူးမရ။ မင်းရဲ့ငါးပြတိုက်မှာရှိတဲ့ရေလီတာပမာဏကိုသူ့ရဲ့ filter တွေကိုခွဲခြားထားတယ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်စစ်ထုတ်ရန်အပိုပစ္စည်းများ (ရေမြှုပ်၊ မီးသွေး ... ) ကိုလည်းရောင်းသည်။
ဤအမှတ်တံဆိပ်၏စစ်ထုတ်မှုများ သူတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ပထမနေ့ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်နိုင်သည်မရ။ အင်ဂျင်မပျက်စေရန်မှန်ကန်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်ခုသာပြုလုပ်ရပါလိမ့်မည်။
Eheim ပြင်ပ Filter ...
ဂျာမန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ရေနှင့်ပတ်သက်သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင်ထူးချွန်သည်ငါးပြတိုက်များသို့မဟုတ်ဥယျာဉ်များဖြစ်ပါစေ။ ၎င်း၏ filter များ၊ ကျောက်စရစ်သန့်ရှင်းရေးများ၊ ရှင်းလင်းချက်များ၊ ငါး ​​feeders များသို့မဟုတ်ငါးပြတိုက်အပူပေးစက်များသည်အထူးထင်ရှားသည်။ ၎င်းသည်ကိရိယာများကိုရောင်းချရုံသာမက၎င်း၏စစ်ထုတ်မှုများအတွက်ဖြန့်ဖြူးပေးသောအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာငါးမွေးကန်များအတွက်မူလရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်သောရေစုပ်စက်များလည်းရှိသည် အခြေအနေများကိုတွက်ချက်ရာတွင်ဆာဗာများကိုအေးစေရန် အဆက်မပြတ်၊ အနိမ့်ဆူညံသံနှင့်အကျိုးရှိနည်းလမ်းတို့ဖြင့်
ဒီရေတက်သည် ငါတို့ကျောပိုးအိတ် filter များ ၀ ယ်နိုင်သောအရည်အသွေးကောင်းအခြားအမှတ်တံဆိပ် ငါတို့ငါးပြတိုက်အတွက် ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများအတွက်အထူးရည်စူးသောအမေရိကန်ဓာတ်ခွဲခန်း Seachem ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်စိတ်ကြွဆေးများ၊ ဖော့စဖိတ်ထိန်းချုပ်မှုများ၊ အမိုးနီးယားစမ်းသပ်မှုများ ...
Tidal filter များသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များမပါ ၀ င်သော ၀ ယ်လိုအားများအတွက်နာမည်ကြီးသည်။ ရေစစ်မျက်နှာပြင်များ၊ ဥပမာ၊ ချိန်ညှိနိုင်သောရေပမာဏ (သို့) ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စုပုံနေသောအပျက်အစီးများအတွက်သန့်စင်စက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးပြတိုက်အတွက်ကျောပိုးအိတ် filter ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောကျောပိုးအိတ် filter ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဲဒါကြောင့်ငါတို့ဒါကိုမင်းကိုကမ်းလှမ်းတယ် သတိပြုရန်အချက်များ:
ငါးပြတိုက်၌ကျွန်ုပ်တို့ရှိငါးပေါ် မူတည်၍ filter အမျိုးအစားတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ဥပမာ၊ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ မင်းမှာပုစွန် (သို့) Betta ငါးရှိလျှင်ကျောပိုးအိတ် filter များကိုရှောင်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အကယ်၍ သင်၌အတော်လေးညစ်ပတ်သောငါးကြီးတစ်ကောင်ရှိလျှင်အတော်လေးအစွမ်းထက်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်စင်ထားသောကျောပိုးအိတ်ကိုရွေးပါ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်ငါးများစွာပါ ၀ င်သည့်ငါးပြတိုက်များတွင်ကောင်းမွန်သောဇီဝသန့်စင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မဟုတ်ပါကဂေဟစနစ်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုဟန်ချက်ပျက်သွားနိုင်သည်။
ငါးပြတိုက်၏အတိုင်းအတာသည် filter တစ်ခု (သို့) အခြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်တူညီစွာအရေးကြီးသည်မရ။ ထို့ကြောင့်၊ ပုံစံတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကိုမဆုံးဖြတ်မီ၊ သင်၏ငါးပြတိုက်တွင်မည်သည့်စွမ်းရည်နှင့်သန့်ရှင်းစေရန်တစ်နာရီလျှင်စစ်ထုတ်ရန်ရေမည်မျှလိုအပ်သည်ကိုတွက်ချက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စကားမစပ်ကျောပိုးအိတ် filter များသည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားငါးပြတိုက်များအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် filter ကိုအနားတွင်နေရာအနည်းငယ်လိုလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည် filter များအနားတွင်နေရာအနည်းငယ်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းကိုတိုင်းတာကြည့်ရန်မထိခိုက်ပါ။ ငါးပြတိုက်သည်နံရံတစ်ခုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
အမှန်တော့ငါးပြတိုက်အမျိုးအစားသည်ကျောပိုးအိတ်စစ်ထုတ်သူများအတွက်ပြဿနာမဟုတ်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည် သူတို့၏စွယ်စုံသုံးမှုကြောင့်မည်သည့်အခန်း၌မဆိုအလွန်လိုက်ဖက်သည်မရ။ ရေကိုစုပ်ယူထားသောပြွန်သည်ပေါင်းပင်များအတွင်း၌ဖုံးကွယ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်၎င်းတို့အားငါးပြတိုက်များအတွက်စိုက်ရန်အကြံပြုသည်။ သို့သော်ဤစစ်ထုတ်အမျိုးအစားများမှထုတ်လုပ်သောလက်ရှိသည်အလွန်အားကောင်းသည်ကိုသတိရပါ။
အတိတ်ဆိတ်ဆုံးကျောပိုးအိတ် filter ကဘာလဲ။
တစ်ခုရွေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည် သင်သည်သင်၏ငါးကိုဖိအားမပေးလိုလျှင်အသံတိတ်စစ်ထုတ်ပါ…ဒါမှမဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်၊ အထူးသဖြင့်မင်းမှာငါးပြတိုက်ကိုအခန်းတစ်ခုထဲမှာထားပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့။ ဤသဘောအရအသံတိတ် filter များအတွက်အကျော်ကြားဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များမှာ Eheim နှင့် AquaClear ဖြစ်သည်။
သို့သော်ဤမျှပင် filter တစ်ခုသည်အသံမထွက်ဘဲအမှားမလုပ်ဘဲပင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်မရ။ ၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်
အဲဒါစစ်ဆေးပါ ကျောက်စရစ်ခဲ (သို့) အကြွင်းအကျန်အချို့မပိတ်မိပါ တုန်ခါမှုကိုဖြစ်စေသည်။
မင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရင်စစ်ထုတ်ရာကထွက်လာတဲ့သန့်ရှင်းတဲ့ရေတံခွန်က ရေအဆင့်ကိုတော်တော်မြင့်အောင်ကြိုးစားပါ (သင်သုံးလေးရက်လျှင်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်အားဖြည့်ရမည်) ထို့ကြောင့်ရေတံခွန်၏အသံသည်သိပ်မပြင်းထန်ပါ။
nano ငါးပြတိုက်များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကျောပိုးအိတ်စစ်ထုတ်များရှိသော်လည်းအမှန်တရားမှာထိုအရာဖြစ်သည် sponge filter ပါသောငါး tank တစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုံလောက်ပါလိမ့်မည်မရ။ ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းရေတံခွန် filter များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးများကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ပုစွန်သို့မဟုတ်ကလေးငါးများဖြစ်လျှင်သူတို့ကိုသတ်ပစ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့ကတစ်ခုရွေးတာပိုကောင်းတယ် sponge filter သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအားမတော်တဆမျိုချနိုင်သောမည်သည့်ရေစုပ်စက်မှမရှိပါဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာကအဆအားဖြင့်ပိုသေးငယ်လာသည်။ ရေမြှုပ်စစ်များသည်သူတို့၏နာမည်ကိုအတိအကျဖော်ပြသည်။ ရေကိုစစ်ထုတ်သောရေမြှုပ်သည်သုံးပတ်ခန့်အကြာတွင်ငါးကန်ဂေဟစနစ်အတွက်အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားများပါ ၀ င်သည်။
ငါတို့ကမင်းကိုဒီဆောင်းပါးနဲ့ကျောပိုးအိတ်တွေစစ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုပိုနားလည်အောင်ကူညီပေးမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ၊ ဤငါးပြတိုက်သန့်စင်မှုအမျိုးအစားကိုသင်သုံးဖူးပါသလား။ မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကဘာလဲ။ အမှတ်တံဆိပ် (သို့) ပုံစံတစ်ခုကိုသင်ထောက်ခံပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါး၏ » ပစ္စည်းများ » Aquarium ကျောပိုးအိတ် filter များ
ငါးပြတိုက်ကိုအလှဆင်ရန်စိတ်ကူး ၆ ချက်